China Kuumbwa bhokisi for otomatiki Kuumbwa mutsara fekitari uye bhizimisi | Sofiq
Richigadzirisa bhokisi otomatiki Kuumbwa mutsetse
Sandbox muKukanda Machine Systerm
Kavha Details: mushwi chiputiriso kana Wooden bhokisi
Dhizaini Yekutumira: mukati memazuva makumi matatu uchinge wagamuchira dhipoziti
1. Iva nekuomarara kwakakwirira.
2.Inogona kutakura yakanyanya kumanikidza kukanganisa.
3. Inogona kumhanya zvakanaka mukuumba mutsara.
4. Dhizaini uye gadzira saizi dzakasiyana dzemabhasketi pane zvaunoda.
Chinu ndiye michina inokosha michina kuti otomatiki kana Semi-otomatiki Kuumbwa mutsetse. Kugadzira nemhando yepamusoro yeCCC muchina kuverengera kunyatsoita uye kushandurana kwakanaka, kujeka kunoongorora pamwe neCMM. Zvinyorwa zvesimbi ductile, grey simbi yegiredhi repamusoro uye yakasungwa-simbi inogona kuwanikwa, chinu chine yakasimba kuomarara uye inogona kutakura yakanyanya kumanikidza. Tinogona kugadzira nekugadzira saizi dzakasiyana dzemabhasketi pane zvaunoda, zvakare isu tinogadzira chinu uye pallet mota zvinoenderana nemifananidzo uye technical technical yemutengi.
Kuumba matanda chishandiso chinoshandiswa mune ekutanga. Kana muchina wekuumba uchinge uchishanda, iyo Mabhodhoro ekuumba anochengeta jecha kuti riumbe chimiro. Mushure mekunge zvinhu zvakaita sesimbi yakanyungudutswa zvadururirwa mujecha rakaumbwa iro raive rakabatwa nekuumba Mabhasikiti, iyo yakanyungudutswa zvinhu zvinozomarara uye kuumba kukanda kwaunoda. Kuumba mabhodhoro kazhinji kunogadzirwa kubva kune yakakoswa simbi uye wozogadzirwa kuti uwane zvirevo.
Dhizaini Yekutumira: mukati memazuva 30-90 mushure mekugamuchira dhipoziti
1. Tarisa pane yakakura / yepakati saizi castings, pamwe ne diki saizi idzo.
2.Gray simbi / Ductile simbi Kudzingwa pamwe Resin-Waakaita jecha Kudzingwa muitiro.
1.Sample kana Drawing kubudikidza mutengi
2.Tooling chikumbiro & Kukurukurirana
3.3D Kubata Dhizaini
5.Rough zvikamu mugadziri
7.Fitting & Pedza
8.Tooling Kuyera & Tarisa
14.Sample Kubvumidzwa nemutengi
Mashoko Grey simbi 200, 250, 300, 350, 400
Ductile simbi 400, 500, 700
Saizi & Dhizaini Sezvinoenderana nemifananidzo yemutengi uye zvinodiwa
Kurema renji Iyo yakakwira imwechete chidimbu masimbi 80 MT
Maching CNC hwokugaya hwakabvira Machine, Machine centre, Vertical lathe,
Digital uriri kunofinha uye azvikuya muchina, Drill muchina,
Kuedzwa Kutungamira-kuverenga analyzer / ChiGerman SPECTRO,
Otomatiki yedhijitari kabhoni & sarufa yekuongorora,
Yakadzika-tembiricha inokanganisa kuyedza muchina,
60MT Hydraulic universal yekuyedza muchina, nezvimwe.
Surface kurapwa Kurapa kwekupisa, kuronga, kukwenya, kupenda, nezvimwe.
Kurongedza Sezvinodiwa nemutengi
kukanda simbi, grey simbi kukanda, ductile simbi kukanda, mhando yepamusoro uye chaiyo simbi yekukanda yesimbi michina maturusi, hombe nepakati-saizi-saizi-yekushambadzira zvigadzirwa zvakananga kubva kwedu fekitori
Flaskndiyo yakakosha tekinoroji michina ye otomatiki kana semi-otomatiki kuumba mutsara. Kugadzira nemhando yepamusoro yeCCC muchina kuverengera kunyatsoita uye kushandurana kwakanaka, kujeka kunoongorora pamwe neCMM. Zvinyorwa zvesimbi ductile, grey simbi yegiredhi repamusoro uye yakasungwa-simbi inogona kuwanikwa, chinu chine yakasimba kuomarara uye inogona kutakura yakanyanya kumanikidza. Tinogona kugadzira nekugadzira saizi dzakasiyana dzemabhasketi pane zvaunoda, zvakare isu tinogadzira chinu uye pallet mota zvinoenderana nemifananidzo uye technical technical yemutengi.
Weifang Sofiq Machinery Co., Ltd. isainzi uye tekinoroji mabhizinesi, iri muWeifang Guta Hanting dunhu padyo neBeihai Road, nyore kutakura. H anshuo Machinery iri kuita foundry michina yekugadzira nyanzvi yekutengesa, dhizaini uye kugadzira kweinotevera mikuru zvigadzirwa: chinu uye pallet mota yekuumba mutsara, otomatiki static kumanikidza kuumba mutsetse, otomatiki, semi-otomatiki akateedzana e flask kuumba mutsetse, otomatiki slip flasks yakatwasuka tambo yekuumba, semi-otomatiki yekudira muchina uye wekubatsira muchina wekuumba mutsara, michina yekuumba mutsara, michina yekuumba michina, BLT, JYB akateedzana ezera rekutakura uye dzakasiyana dzisiri dzakajairwa ndiro ndiro.
Fekitori yedu yakashongedzwa zvakanaka uye ine state-of-art hunyanzvi hwehunyanzvi, kunyatso kuona zvinoreva. Kwemakumi emakore, isu tinounganidza hupfumi hwekugadzira ruzivo nehupamhi hwekugadzira hunyanzvi uye nhanho. Kuburikidza nehunyanzvi chigadzirwa uye dhizaini dhizaini, isu tinopa zvakagadzirwa-zvakagadziriswa mhinduro kumutengi.
Iyo kambani yakagara ichitsigira yakakosha tsika ye "kugadzira kukosha kwevatengi", uye kuomerera kunheyo yekutendeseka uye kubatsirana kubatsirana kuwana kuhwina-kuhwina mamiriro. Tiine kuramba utsanzi, tinosungirwa kugovera edu akakwana zvigadzirwa uye akanakisa sevhisi kune vatengi.
Kuburikidza nehunyanzvi chigadzirwa uye dhizaini dhizaini, isu tinopa zvakagadzirwa-zvakagadziriswa mhinduro kumutengi. Kubva pane epamberi fekitori, zvirinani kugadzirisa tekinoroji, yakasimba kugadzirisa kudzora uye yemhando yekutarisa, isu tinogara tichitenda mukubata kwemhando yekutanga uye kugutsikana kwevatengi.
1. Uri mugadziri kana kambani yekutengesa?
Tiri kuita kukanda michina yekugadzira nyanzvi yekutengesa
2. Ndingawana sei mimwe mienzaniso?
Kana iwe uchida, tinofara kukupa masampuli emahara, asi vatengi vatsva vanotarisirwa kubhadhara mutengo wekutakura, uye mubhadharo uchabviswa pamubhadharo wehurongwa hwepamutemo.
3. Unogona kuita kukanda zvinoenderana nekudhirowa kwedu?
Hongu, tinogona kuita vachikanda maererano mufanidzo wako, 2D kudhirowa, kana 3D kadhi womuenzaniso. Kana iyo 3D cad modhi inogona kupihwa, kusimudzira kwekushandisa kunogona kuve kwakanyanya kushanda. Asi pasina 3D, zvichibva pakudhirowa 2D tinogona kuita kuti masampuli abvumirwe nemazvo.
4. Unogona kuita kukanda zvichibva pane zvedu sampuli?
Ehe, isu tinogona kuita kuyera kunoenderana nemasampuli ako kuita mifananidzo ye tooling kugadzira.
5. Ndeupi mudziyo wako wekudzora mhando mumba?
Tine spectrometer mumba yekutarisa makemikari zvivakwa, tensile bvunzo muchina kudzora michina chivakwa uye UT Sonic seNTT yekutarisa nzira yekudzora kukanda kuona pasi pechiso chekukanda.
Pashure: Kunofambira mberi Pressure otomatiki paaivaumba Machine
Zvadaro: Richigadzirisa bhokisi otomatiki Kuumbwa mutsetse
Kunofambira mberi kumanikidzwa richigadzirisa Line
Chinwiwa richigadzirisa, Richigadzirisa vachikanda chinu, Sandbox, Chinwiwa Mould Machine, Semi-Automatic richigadzirisa Machine, Punch Out Muchina,